Iindaba-Iimveliso ezilungileyo ze-Effet
Iimveliso ze-Effet ezilungileyo
Ingaba isebenza kanjani:
Le mveliso isebenza ngokutshisa amanqatha, ukuphucula ukubonelelwa kwegazi, ukonyuka kwemisipha ukuqina.
ICamellia Sinensis Igqabi, i-Glycerin, i-Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, i-Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, iMentholum
Iziphumo ezilungileyo zifaka isicelo ubuncinci kabini ngemini ngolu hlobo lulandelayo:
1.Thatha ibhafu ebusuku ukonyusa unikezelo lwegazi kunye nokwenza ukufunxa.
2 Faka ikhrimu esiswini, iingalo, imilenze, amathole, umva kunye neempundu ngaphambi kwayo nayiphi na imisebenzi yomzimba kunye okanye ngaphandle kokugoqwa komzimba. Faka inani elifanelekileyo lekhrimu kwaye uthambise umzimba wakho ngendlela esetyhula zombini ngokujonga iwotshi kunye nokuchasana nentsimbi kude kube kulusu lwakho ukuwuthatha ngokupheleleyo, yenza izinto ezinciphisayo zokwenza ukhilimu kwindawo yolusu lwamafutha. Ukukhuthaza ukubola kweeseli ezinamafutha, ukukhawulezisa ukutshiswa kwamafutha, ukuze ufezekise injongo elungileyo yokwehlisa umzimba.
3.Yiphephe ukuyihlamba ngeshawa, ibhafu okanye ukubila okomsebenzi okungenani iyure enye emva kokufaka isicelo.
Ngexesha elifanayo ngexesha lokusetyenziswa kwemveliso musa ukutya kakhulu, ukuthatha ioli eninzi. Nokuba iimveliso zokulahleka kwesisindo ezilungileyo, ukuba awunikeli ngqalelo kukutya okanye awulawuli ukutya kweekhalori. Kuya kukhokelela ekutyebeni kakhulu.
1.Pure 100% yemichiza yokuSusa imilebe
Akukho nto ngaphandle komgangatho ophezulu wezinto eziphilayo ezenziweyo kubushushu obugqithisileyo bokugcina izakhamzimba ezibalulekileyo kwizithako ezikunika amava agudileyo, asebenzayo omlomo kunye namava okuthambisa.
Injongo Ezibini-Ukukhupha nokunyusa imilebe yemilebe: Le LIP SCRUB imangalisayo ineempawu zeOrganic, iswekile endaweni yencasa yemichiza. Indibaniselwano ehlakaniphileyo yeOrganic, istrawberry, iblueberry, itshokholethi, amasuntswana ecucumber kudala isisombululo esifanelekileyo sokukhathalelwa komlomo ukukhupha imilebe eyomileyo, erhabaxa KUNYE namagqabi ashiye ngasemva umphumo wokuthambisa osulungekileyo kwimilebe yomntwana ethambileyo.
Ngenkohlakalo simahla: Umlomo wethu awukhe uvavanywe kwizilwanyana.
Indlela yesiqhelo yobuhle kufuneka ubenayo: ukukhupha imilebe yomlomo wakho kufuneka uyenze ukuze uqiniseke ukuba imilebe yakho igudile, ithambile kwaye ilungile. Yenza imilebe yakho ibemnandi kwaye iphuze ngokupheleleyo!
2.Ukusebenza ngokukuko -Climing Cream
I-cream yokunciphisa ineziphumo ezithile ekunciphiseni amafutha, ngakumbi kwabo banekratshi, le mveliso ineziphumo ezilungileyo kakhulu.
Inokuba neziphumo ezibonakalayo emva kwenyanga enye yokusetyenziswa.
Ukuqhubeka kokusebenzisa iinyanga ezimbalwa kunokukunika esona siphumo siphezulu singarhoxisi kangako xa uyeka ngokupheleleyo.
Ngokukodwa, le khrim inciphayo inefuthe elihle kakhulu ekuphuculeni imilenze yokudumba.
Kodwa kubantu abafuna ukunciphisa umzimba ngokukhawuleza okanye abanamafutha amaninzi, basebenzise kube kanye kusasa nakanye ngokuhlwa.
Ukugcina esona siphumo sihle kuyacetyiswa ukuba kusetyenziswe iinyanga 3-5 / ngonyaka.